श्रीमान् विदेशमा, खेत बाँझै !
सागर चन्द धादिङ, २१ असार
मध्य असार । बादलले छोपिएको छ आकाश । रोपाइँको रौनक । कतै देखिन्छन् पानीले टिलपिल भएका गरा । कतै देखिन्छन् भर्खरै धान रोपिएका खेत । कतै देखिन्छ, खेतभरि रोपार ।
धादिङ धार्केबाट करिब १ घण्टा उकालो चढेपछि पुगिन्छ, रानीमाला । गल्छी गाउँपालिका वडा–८ मा छ, हीरा तामाङको घर । तामाङको घरमा पुग्दा उनी एकोहोरो हेरिरहेकी थिइन् बेंसीतिर ।
पृथ्वी राजमार्ग किनारका धार्के र महादेवबेंसी क्षेत्रमा रोपाइँ चलिरहेको छ । माथि पहाडको टुप्पोमा बसेकी तामाङका आँखा बेंसीमा भइरहेको रोपाइँमै अल्झिएका थिए ।
तामाङलाई घरमा एक्लै देखेपछि मैले सोधें, ‘अरू कोही छैनन् घरमा ?’
‘पुरुषको घर हुँदैन, महिलाको थर हुँदैन,’ तामाङले लाक्षणिक जवाफ फर्काइन् ।
सवाल जबाफको सिलसिला चलिरहँदा तामाङका नजर बारम्बार बेंसीतिर दौडिन्थे ।
‘के छ दिदी तल त्यस्तो ?’ मैले सोधें ।
‘खेत छ ।’ उनले सटिक जबाफ फर्काइन् ।
एकछिन मौन बसिन् ।
मौनता बिथोल्ने गरी बेंसीको सडकमा गुडेको गाडीको प्रेसर हर्न सुनियो ।
‘घरमा कोही छैनन् । एक्लै हुन्छु, यस्तै हो,’ तामाङले बिस्तारै भनिन् ।
दुई छोराकी आमा, उनी ३८ वर्षकी भइन् । जीवनको आधा उमेर काटिसकेकी तामाङ अहिले एक्लै छिन् । उनको घरमा आफन्तको नाममा केही बाख्रा मात्रै छन् ।
‘बिहानदेखि साँझसम्म यिनै (बाख्रा)सँगै बस्यो, दिन काटिन्छ,’ तामाङको स्वर भारी सुनियो ।
‘दुई छोरा थिए । ती पनि बाहिर छन्,’ आफ्नो उदासीको पोयो फुकाउन थालिन् तामाङ ।
‘जेठो छोरा पोखरामा गाडीमा काम गर्छ,’ अघि बजेको प्रेसर हर्नले उनी बिथोलिनुको रहस्य खुल्यो । प्रत्येकपटक जब उनी गाडीको आवाज सुन्छिन् । गाडीको हर्न सुन्छिन् तब छोराको सम्झना झुल्किन्छ उनको मनमा । उनका जेठो छोरा २१ वर्षका भए ।
‘तामाङको जातै यस्तो छोरा मान्छे घरमा त बस्दै नबस्ने,’ उनी आफ्नो जातलाई सराप्न थालिन् ।
उनका कान्छो छोरा १९ वर्षका भए । ‘कान्छो पनि काठमाडौंतिर छ, के गर्छ ? कसो गर्छ ? थाहा छैन,’ उनी धाराप्रवाह बोल्न थालिन्, ‘कहिलेकाहीँ फोन गर्छ, काम गर्दैछु भन्छ । के पो काम गर्छ ?’
आकाशको बादल फाट्यो । घाम चर्कियो । बेंसीमा पानी भरिएका खेतका गरा टल्किन थाले । तामाङको नजर फेरि सोझिए बेंसीतिरै । आँखामा चहक देखियो । माइक्रोलेन्स हुँदो हो त उनका एक जोर आँखामा बेंसीमा टल्किएका खेत पनि देखिँदा हुन् ।
तामाङले १५ वर्षमै बिहे गरेकी थिइन् । बिहे गर्दा उनले कल्पनासम्म गरेकी थिइनन्, जिन्दगी यसरी एक्लै बिताउनुपर्ला ?
‘के गर्नु त ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरिन् । सुरुवालको गोजीबाट मोबाइल निकालिन् र भनिन्, ‘अब त यही हो सहारा । यसैको भरमा चल्छ जीवन ।’
सांकेतिक भाषा बोल्न सिपालु तामाङले भनिन्, ‘यसले (मोबाइल) मन बुझाउँदैन ।’
बर्खाको मौसम । झरी पर्यो । आँगनमा बसेका हामी पिँढीमा गयौं । उनी दौडिँदै गइन् र बाख्रालाई गोठभित्र हुलिन् ।
बाख्रा हुलेर आएपछि पिँढीमा बस्दै केही सम्झेजसरी उनले भनिन्, ‘ओहो, छ्याङ पो खानुहुन्थ्यो कि ?’ उनले सोधेकी हुन् या अफर गरेकी हुन्, दोधारमा परें म । मैले जबाफ नदिइसक्दै उनले भित्र गएर ‘हलका’को दुई बटुकामा छ्याङ लिएर आइन् ।
‘बाहुन चियाले सत्कार गर्छन्, हाम्रो त यस्तै हो,’ बटुका राख्दै उनले तामाङ सत्कारबारे प्रस्ट्याइन् ।
‘गनगने’ बर्खे झरी जस्ताको छानामा ठोक्किँदा आउने आवाज पहिलोपटक समुधर लाग्यो मलाई । जस्तामा ठोक्किएको झरीको आवाजले हाम्रो कुराकानीमा संगीत थप्यो ।
प्रसंग झरीतर्फ नै मोड्दै मैले सोधें, ‘रोपाइँमा जानुभएन दिदी ?’
‘कसको रोपाइँमा जानु ?’ उनले फेरि उल्टै मलाई प्रश्न गरिन् ।
‘खेत छैन तपाईंको ?’ मेरो प्रश्न ।
‘बारी छ,’ उनको जवाफ ।
जवाफ सुनेर म अवाक् भएँ । र्यापिड फायर शैलीको प्रश्न छाडेर मैले अर्को प्रश्न तेस्र्याएँ तामाङतिर, ‘घर खर्च कसरी चल्छ त दिदी ?’
‘श्रीमानले पठाउनुहुन्छ,’ उनको सटिक जवाफ ।
‘श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्छ ?’ उनको जबाफले फेरि मलाई र्यापिड फायर शैलीको प्रश्न सोध्न बाध्य बनायो ।
‘विदेश जानुभाको छ,’ अब उनको स्वर अघिको जस्तो बलियो थिएन । स्वरमा आर्द्रता मिसिएको थियो । भावनाको अतुल गहिराइबाट आएको उनको स्वर कण्ठमै कतै अलमलिँदै, रुलमलिँदै आएजस्तो सुनियो ।
डेढ वर्ष भयो हीरा तामाङका श्रीमान् शम्भु तामाङ बिदेसिएको । त्यसभन्दा पहिले पनि उनका श्रीमान् चार वर्ष विदेश बसेर आएका थिए । साढे पाँच वर्षदेखि तामाङका श्रीमान विदेशमा छन् ।
‘डेढ वर्षअगाडि एक महिनाका लागि आउनुभएको थियो,’ मुस्कुराइसकेका उनका ओठ बीचैमा रोकिए । आँखामा झुल्किनै थालेको उज्यालो एकाएक गायब भयो । उनले बटुकामा रहेको छ्याङ स्वाट्टै पारिन् । एकै श्वासमा आधी बटुको रित्याइसकेपछि उनले चुरोट सल्काइन् । घाँटी आकाशतिर फर्काएर धुवाँ उडाइन् ।
धुवाँसँगै उनको अनुहारमा छाएको उदासी पनि उड्यो । उदासी उडेपछि अनुहार निस्तेज देखियो । मैले पहिलोपटक चाल पाए उदासीमा पनि तेज हुँदो रहेछ ।
तामाङको अनुहारबाट उदासी गायब भएपछि लाग्यो उदासी नै उनको परिचय हो । उनीबाट उनी हराएजस्तो महसुस भइगयो मलाई ।
‘यो डाँडोमा पानी पनि किनेर खानुपर्छ,’ अचानक सुनिएको उनको आवाजले म झस्किएँ । धारामा हेर्दा मिटर जोडिएको देखियो । महिनाको ६÷७ सय रुपैयाँ तिर्नुैपर्छ पानीको महसुल । बिजुलीको महसुल तिर्नैपर्छ । नुन, तेल, लत्ताकपडा, साबुन यस्तै-यस्तै किन्नैपर्छ ।
‘अनि विदेश नगाई काँ जानु त ?’ उनको आवाज अझै मत्थर भएको छैन, ‘घरमा स्वास्नीसँग सुतेर आउँदैन !’
जीवनका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बिदेसिएका श्रीमानको सम्झनामा जीवन बिताउने तामाङजस्तै अन्य लाखौं महिला छन् देशमा ।
धैर्यसँग श्रीमानलाई पर्खिने तामाङ जस्तै महिलाहरुले श्रीमानसँगै नयाँ लुगा पनि पर्खिन्छन् । पसलको उधारो तिर्ने दिन पर्खिन्छन् । घरको छानो टाल्ने दिन पर्खिन्छन् । उपचार गर्ने दिन पर्खिन्छन् । यस्तै यस्तै गर्दा गर्दैै जीवनभर नै पर्खिन्छन् ।
रानीमाला पहाडको दक्षिणतर्फको बेंसीतर्फ औंला सोझ्याउँदै तामाङले भनिन्, ‘ऊ त्याँ तल खेत देख्नुभयो ?’
‘त्याँ दस मुरी फल्ने खेत छ, खन्ने मान्छे विदेश छ...।’ बोलिरहेको कुरा अधुरै छाडिन् ।
साढे पाँच वर्ष भएछ उनको खेत बाँझै रहेको । खन्ने–जोत्ने मान्छे अर्थात् श्रीमान् विदेश भएपछि खेत बाँझै छ ।
‘खेताला पनि पाइँदैनन्,’ उनले अघि अधुरो छाडेको वाक्य पूरा गरिन् ।
भएको खेत बाँझै छ । चामल बजारबाट किनेर खान्छिन् ।
खेत रोप्न नसके पनि उनले घर अगाडिको बारी भने हराभरा बनाएकी छन्, मन बुझाउनै सही । कसैले खेत किन नरोपेको भनेर सोध्यो भने उनी भन्छिन्, ‘खेत चलाउनु कि बारी ?’ अस्वाभाविक मुस्कानसहित उनले यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा खेत बाँझो रहेको पीडाका रेसा देखिन्छन् ।
बादलले छेकेको सूर्य पश्चिम पहाडमा लुक्यो । बिस्तारै अँध्यारो खस्यो पृथ्वीमा । तल बेंसीको खेत देखिन छाड्यो । खेत देखिन छाडे पनि पृथ्वी राजमार्गमा गुडिरहेका गाडीको चहकिलो लाइट भने देखिन्छ ।
बाख्रालाई रातिको घाँस खुवाउन गोठतर्फ जाँदा जाँदै तामाङले भनिन्, ‘श्रीमान् भाको जस्तो त काँ हुन्छ र ?’
अन्धकार चिर्दै उनको स्वर पहाडमा ठोक्कियो र परिवर्तित भएर फेरि सुनियो । उनको यो प्रश्न यसरी नै हरेक साँझ पहाडी खोंचमा गुन्जिरहन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २१, २०७६, ०९:३८:००
भारत, नेपाल र पाकिस्तानका सरकार प्रमुखलाई भेटेर के सन्देश दिन खोज्दैछन् चिनियाँ राष्ट्रपति ?
चीनले यसरी डुबाएको थियो श्रीलंकाको बन्दरगाह
‘देशमा सर्वस्वीकार्य लेखकै जन्मिएनन्’
साहित्य महोत्सवमा ‘बागी बहस’
सत्ता कि प्रतिपक्ष ?